Saamaynta dhaqaale xumida Giriiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Scanpix Montage: Sveriges Radio.
Saamaynta dhaqaale xumida Giriiga
La daabacay onsdag 16 maj 2012 kl 09.29
Saamayn intee leeg ayey ku leedahay dalkan Sweden dhaqaale xumida ka jirta dalka Giriiga?
Doorasho cusub ayaa laga hirgalinayaa dalka Giriiga dhawaan kadib markii siyaasiyiinta dalkaasi ay ku guul daraysteen in ay dhisaan dawlad hoogaamisa dalkaas oo baryihii ugu dambeeyay aad u liitay dhaqaale ahaan.
Doorashaadii ka dhacday dalkaas isbuuc ka hor ayaa waxa kor ukacday tirada u codaysay xisbiga bidixda iyo xisbiyada ku midoobay dhanka bidixda ee Syriza, kuwaaso aad u dhaleeceeyay nidaamka dhaqaalaha ee dalkaasi, taaso sababtay in ay dadyow badani siiyaan codkooda.
Syrizas ayaa hada rajaynayaa hogaamiye cusub oo maamulka talada dalkaas la wareega.
Kadib markii la iclaamiyey doorasho cusub ayaa hogaamiyaha Syriza Alexis Tsipras soo dhaweeyay, sheegayna in dawlad ka koobaan dhanka bidixda oo haysta codka shacabka ay dhisi doonaan dawlad.
Sida ay hada u eegtay ayaa tira koobkii ugu dambeeyay ay ku caday in xisbiga Syriza uu yahay kan ugu codka badan xisbiyada cod ka haysta bulshada.Oroliga ekonomiska bedömare och europeiska ledare talar om att Grekland måste följa utlovade besparingsplaner för att kunna stanna i eurosamarbetet.
Nin ka hawl gala gudiga doorashooyinka oo ka tirsan xisbiga Syriza ayaa sheegay in ay noqon doonaan xisbiga ugu weyn, waxa qudha ee ay hada doonayaana ay tahay in doorasho cusub la sameeyo.
Sida ku cad saxaafada dalka Giriiga ayaa doorashadani u eegtay mid lagu kala dooranayo lacagta EURO iyo DRACHMA.
Wali waxa jira khilaaf ka dhaxeeya gudaha xisbiga bidixda, balse waxa lagu raja qabaa in xisbigaasi u saamayn wayn ku yeesho doorashada cusub ee lagu dhawaaqay hada.
Xarunta waxa u ah doorashadan cusub in ay dalka giriigu sii haystaan isticmaalka lacagta Yurub ee EURO-Da iyo in kale.
Dhibkuna wuxu ka jira in aanay cidiba ogayn siday wax u dhici doonaan.